10 Torohevitra ho an'ny fialantsasatra ho an'ny fianakaviana any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Torohevitra ho an'ny fialantsasatra ho an'ny fianakaviana any Eropa
Ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa dia mety hahafinaritra ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra raha kasainao tsara izany. I Eoropa dia tany misy trano mimanda sy tetezana, valan-javaboary maitso, ary tahiry ahafahan'ny zazavavy sy zazalahy mody atao hoe andriambavy sy andriana mandritra ny iray andro. Misy làlana fitsangantsanganana mahafinaritra ary teboka marobe ho an'ny dia an-kalamanjana any ivelany, saingy fanamby ny mandeha miaraka amin'ny ankizy.
Manomboka amin'ny fikasana hatramin'ny fonosana, Izahay dia namolavola ny mpitari-dalana faratampony amin'ny dia lavitra iray nofinofy. Araho fotsiny ny anay 10 torohevitra tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa mba hiantohana ny dian'ny fianakaviana epic.
Lalamby fitaterana no tena namana tontolo iainana fomba Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Tapakilan'ny fiaran-dalamby mora indrindra eran'izao tontolo izao.
1. Torohevitra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa: Ampandraiso anjara ny zanakao
Ny tsiambaratelo amin'ny fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny fianakaviana dia rehefa eny an-tsambo sy mientanentana ny fianakaviana iray manontolo. Eoropa dia feno marika famantarana mahavariana, attractions, valan-javaboary fialamboly, sy toerana hitsidihana, ary ny fandraisan'ny zanakao anjara amin'ny drafitra ny dianao any Eropa dia hivadika fialan-tsasatra nofinofy. Ataovy mialoha ny fikarohana ataonao, mifantina ireo manintona tianao hotsidihina, ary ny toerana tian'ny zanakao, ary avy eo asaivo maka ny ankizy 3-4 manintona amin'ny lisitra. Amin'ity fomba ity dia faly ny rehetra ary manana zavatra andrasana isan'andro.
Bruxelles mankany amin'ny vidin'ny lamasinina any Amsterdam
Lafo mankany London hatrany Amsterdam
Vidin'ny lamasinina any Berlin mankany Amsterdam
Vidin'ny lamasinina any Paris mankany Amsterdam
2. Mijanona ao amin'ny AirBnB
Airbnb dia mora kokoa, manokana kokoa, ary manana fahatsapana modely, izay tena zava-dehibe ho an'ny ankizy rehefa lavitra ny trano. Airbnb dia safidy tsara hipetrahana ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa satria lafo be ny trano fandraisam-bahiny any Eropa, na dia amin'ny fifampiraharahana amin'ny sakafo maraina aza. Ny fijanonana ao amin'ny Airbnb dia manome lakozia handrahoana sakafo, sakafo atoandro-to-Mandehana, ary ny fotoana fisakafoanana maraina rehefa afaka mifanakalo hevitra momba ilay andro ianao.
koa, misy toerana malalaka sy tsiambaratelo ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny, miala sasatra aorian'ny fizahana tontolo andro.
Vidin'ny lamasinina any Florence mankany Roma
Naples mankany Roma ny vidin'ny fiaran-dalamby
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Florence mankany Pisa
Roma ka hatrany Venice ny vidin'ny fiaran-dalamby
3. Torohevitra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa: Mialà eo afovoan-tanàna be atao
Eoropa dia feno tahiry voajanahary mahafinaritra sy valan-javaboary, miaraka amin'ny làlana fitsangantsanganana mahafinaritra sy toerana fitsangantsanganana. Ny fahalehibiazana voajanahary any Eropa dia miovaova be, na dia mandeha miaraka amin'ny ankizy kely aza ianao, mbola afaka mizaha riandrano sy fomba fijery.
Azo aleha ny ankamaroan'ny valan-javaboary amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy amin'ny ivon-tanàna lehibe. Raha mikasa mialoha ianao ary tonga miomana, tsy misy antony tsy tokony hifalifalianao eny ivelany sy hankafizanao ny rivotra madio, ala, sy ny valan-javaboary misy lohahevitra.
Vidin'ny lamasinina mankany Roma
Vidin'ny lamasinina any Pisa mankany Roma
4. Fandriho ny fitateranao
Ny fahalalana ny lalanao amin'ny fivezivezena amin'ny toerana vahiny dia zava-dehibe rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy. Tsy te ho very ianao ary mandehandeha mandehandeha mandehandeha eny an-tanàna na mandeha amin'ny seranam-piaramanidina, na inona na inona toetr'andro. Ary noho izany, ny fandrindrana sy ny famandrihana ireo fitaovanao fitaterana any Eropa dia hampanantena fialan-tsasatra lehibe ho an'ny fianakaviana.
Tena azo itokisana ny fitateram-bahoaka ary mahazo aina any Eropa. Betsaka ny safidy fitsangatsanganana ao anatiny sy ivelan'ny tanàna. Ny fivezivezena amin'ny lamasinina sy ny lamasinina dia mety amin'ny ankizy satria afaka mankany amin'ny toerana rehetra, fadio ny fifamoivoizana amin'ny teti-bolanao.
Raha ampitahaina amin'ny manofa fiara ary mandany fotoana be dia be mitady fiantsonana na mifantoka amin'ny arabe fotsiny, afaka nankafizinao ny mitaingina sy ny tsakitsaky, rehefa a lamasinina mandeha miaraka amin'ny ankizy any Eropa. Goavana tombony amin'ny fitsangatsanganana any Eropa miaraka amin'ny ankizy amin'ny lamasinina dia ny fivezivezena malalaka amin'ny alàlan'ny lalamby Euro.
Amizotra mankany London Train Prices
Vidin'ny lamasinina any Paris mankany London
Vidin'ny lamasinina any Berlin mankany London
Bruxelles mankany Londres Train Train
5. Torohevitra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa: Pack Light
Traveling in Gara gara eropeana miaraka amin'ny strollers sy valizy lehibe dia mety ho sarotra. Ny gara sasany tsy hanana ascenseur na escalator, noho izany dia tsara kokoa ny manangona sy mandehandeha maivana. Aza hadino ny manangona stroller stroller sy mitondra-ons, amin'ity fomba ity raha ampy taona ny ankizy, afaka mitondra ny entany avy izy ireo.
afa-tsy, ny hazavana manangona dia midika hoe manangona izay ilaina rehetra amin'ny dia ataon'ny fianakaviana. Noho izany, mitazona ny ankizy ho be atao amin'ny dian'ny lamasinina miaraka amina kojakoja fandokoana, audiobooks, na ny fotoana fijerena sary miaina amin'ny iPad, ho fanampiana lehibe.
Vidin'ny lamasinina any Munich mankany Passau
Nuremberg mankany Passau Train vidiny
Salzburg mankany Passau Train vidiny
6. Miara-misakafo amin'ny ankizy any Eropa
Tokony ho fantatrao fa ny trano fisakafoanana any Eropa dia tsy manome sakafo ho an'ny ankizy, ka olon-dehibe’ anjara ho an'ny rehetra. Zava-dehibe indrindra ny manamarika ohatra raha mandeha any Italia ianao, tsy hahita ampahany amin'ny pizza na paty amin'ny haben'ny ankizy ianao, koa miomàna.
fa, tsy mila misakafo hariva ianao. Iray amin'ireo toro-hevitra tsara indrindra azonay amin'ny fitsangantsanganana miaraka amin'ny ankizy any Eropa ny fananana piknikan'ny fianakaviana. Betsaka ny zavatra nolazaina momba ny valan-javaboary any Eropa sy ny natiora satria ny tany mahavariana maitso dia natao fotsiny hampiantranoana fitsangantsanganan'ny fianakavianao. Raiso ny mofomamy, voankazo vaovao, sy legioma eny an-tsena eo an-toerana ary vonona hanao fitsangatsanganana antoandro ianao. Ny vidin'ny tsenan'ny tantsaha dia mora vidy kokoa noho ny amin'ny fivarotana lehibe sy trano fisakafoanana. Mba hamenoana azy rehetra, eritrereto fotsiny ny fomba fijery izay hankafizanao isaky ny manaikitra tsirairay ary maimaim-poana tanteraka.
Vidin'ny lamasinina mankany Munich mankany Zurich
Berlin ny vidin'ny fiaran-dalamby Zurich
Basel mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Zurich
Vidiny mankany Zurich Train vidiny
7. Torohevitra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa: Fitsangantsanganana an-tsambo sy an-tongotra an-tongotra any Eropa
Azonao atao ny manao azy io amin'ny sarintany sy boky ary fampiharana, fa ny fidirana sambo na fitsangatsanganana an-tongotra no tsara indrindra. Amin'ny ankamaroan'ny tanàna eropeana dia misy a fitsangantsanganana an-tanàna an-tongotra maimaimpoana miaraka amin'ny mpitari-dalana eo an-toerana. Ity torolàlana falifaly ity dia hampiseho sy hilaza ny tsiambaratelo notehirizin'ny tanàna tsara indrindra, raha tsy very any an-dalambe ianao. Ity torolàlana ity koa dia hanondro ireo trano fisakafoanana eo an-toerana miaraka amin'ny menus sakafo atoandro ary hanome torohevitra tsara indrindra momba izay tokony hatao ao an-tanàna.
Eropa dia feno lakandrano sy renirano, toy izany, ny fitsangantsanganana an-tsambo dia mahafinaritra hafa ary fomba tsy manam-paharoa hitsangatsangana sy hizaha. Sady hampientam-po ho an'ny ankizy no hiala sasatra ho anao.
Tafiditra amin'ny vidin'ny lamasinina Zurich
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Lucerne mankany Zurich
Bern ny vidin'ny lamasinina Zurich
Geneva mankany Zurich Train vidiny
8. Manokàna fotoana ho an'ny carousel Rides
Ny ankamaroan'ny tanàna eropeana dia hanana carousel mamiratra sy tsara tarehy eo amin'ny kianjan'ny tanàna lehibe. Raha tokony hihazakazaka amin'ny tranonkala manaraka ianao, Mijanòna, ary avelao ny kiddos handeha amin'ny diany betsaka araka izay itiavany azy. Ankafizo mitaingina carousel rehefa eo aorianao ny Tower Eiffel, dia fotoana tsy hay hadinoina ho an'ny zaza sy ny olon-dehibe.
Vidin'ny lamasinina mankany Amsterdam mankany Paris
Rotterdam mankany Paris ny vidin'ny fiaran-dalamby
Bruxelles mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Paris
9. Torohevitra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa: Manokàna fotoana ho an'ny "Oops"
Satria any Suisse ianao, tsy manome toky fa handeha tsara ny zava-drehetra amin'ny dia ataon'ny fianakavianao. Rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao, na inona na inona mety hitranga, na any Eropa aza, koa aza hadino ny mamela fotoana ho anao amin'ny dia. Manokàna fotoana ho an'ny tsy ampoizina tsy voaomana, fahatarana, fanovana ny drafitra noho ny kiddos sompatra, ary manatrika ary vonona hanitsy.
Salzburg mankany Vienna Train Prices
Vidin'ny lamasinina Munich mankany Vienna
Vidiny Graz mankany Vienna Train
Prague mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Wina
10. Asehoy ny ankizy eropeana eny ivelan'ny lalana voakapoka
Ny iray amin'ireo toro-hevitra avo indrindra ho anay amin'ny dia an-tongotra miaraka amin'ny ankizy dia ny fampisehoana azy ireo ny fomba mandeha amin'ny lalana nokapohina tany Eropa. Halaviro ny be sy ny maro amin'ny kianja lehibe, tsipika ho an'ny gelato, sy sary an'ny fianakaviana, amin'ny fitondrana azy ireo any amin'ireo toerana miafina ireo, tanàna mahafinaritra, ary natiora miavaka.
Tian'ny ankizy ny angano sy ny tantara an-tsary niainany, koa ento any amin'ireo toerana ireo ny angano. Ity dia fomba tsara handaniana fotoana miaraka amin'ny kalitao, manao izay tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa, ary ampianaro azy ireo momba ny kolontsaina manankarena sy ny tantaran'ny Eropa.
Eropa dia toerana fialantsasatra ho an'ny fianakaviana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Na fianakaviana mitady traikefa nahafinaritra ianao na mitsangantsangana sy tranombakoka, Europe dia nahazo an'io daholo. Ankoatry ny, Eoropeana ho an'ny fianakaviana raha ny momba ny fitaterana sy ny pas-tanàna manokana. Our 10 torohevitra tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa dia ho fanampiana lehibe rehefa mikasa ny fitsidihanao manaraka na fitsidihana voalohany mankany amin'ny tanin'ny lapa sy angano aza ianao.
Vidin'ny lamasinina mankany Milan hatrany Venice
Vidin'ny lamasinina Padua mankany Venice
Bologna mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Venice
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina ny fialan-tsasatra ho an'ny fianakaviana tsara indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe "Torohevitra 10 tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / ja ho / es na / de sy fiteny maro hafa.
Train Travel Austria, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe